Ribery Oo Si Ba’an U Dhalleeceeyey Siyaasadda Guardiola
HomeGermanyRibery Oo Si Ba’an U Dhalleeceeyey Siyaasadda Guardiola
Xiddiga dhinaca weerarka uga ciyaara kooxda Bayern Munich, Franck Ribery ayaa weeraray siyaasadda isku wareejinta ciyaartooyada ee tababare Guardiola, taas oo uu tilmaamay in aanay mooralka ciyaartooyada u fiicnayn isbedellada badan ee lagu sameeyo.
Inkasta oo ay Bayern Munich ku guulaysatay horyaalka wadanka Jarmalka oo ay dhigtay rikoodh cusub, haddana ciyaartooyada Ribery, Arjen Robben iyo Thomas Mueller ayaa kursiga kaydka uu marar badan dhigay tababare Guardiola, waxaana la sheegay in ay taasi kor u dhaaftay intii ay dadku filayeen in ciyaartooyadan la fadhiisin doono. Mararka qaarkood waxa dhacday in ciyaartooyadan laguba soo dari waayey liiska ciyaartooyada kulamada qaarkood, oo xattaa laga reebay kuwa beddelka ah, waxaanay taasi dareen aan wanaagnayn ku abuurtay xiddiga Faransiiska ah ee Franck Ribery oo awoodi kari waayey inuu qaab-ciyaareed wanaagsan soo bandhigo.
“Mararka qaarkood waad ciyaaraysaa, mararka qaarkoodna kursiga kaydka ayaad fadhiyaysaa, mararka qaarkoodna guriga ayaaba lagaaga tegayaa” ayuu yidhi Ribery oo u warramay Kicker.de.
Ribery waxa uu sheegay in arrimahani ay yihiin kuwo ku cusub kooxda oo shakhsiyadda ciyaartooyada wax u dhimaysa. “Waxay ahayd arrin nagu cusub dhamaantayo. Shakhsiyan, waxaan u baahnahay inaan kulamada ciyaaro. Waxaan u baahnahay inaan ciyaaro shan ama lix ciyaartood ka hor inta aan lay nasinin, laakiin maaha in lay fadhiisiyo marka aan kulan kaliya ciyaaro”. Ayuu raaciyey.
Ribery oo hadda la halgamaya dhaawac ka gaadhay dhabarka oo ay suurtogal tahay inuu kaga maqnaado kulanka faynalka ah ee DFB-Pokal oo ay wada ciyaari doonaan Bayern Munich iyo Dortmund maalinta Sabtida ah, ayaa waxa uu sheegay in ay suurtogal tahay inuu beddel ku soo galo kulankaas, waxaanu yidhi “Waan soo fiicnaanayaa. Waxa laga yaabaa inaan kursiga kaydka fadhiyo ama aan wax ka ciyaaro kulanka”.
Ribery waxa uu xili-ciyaareedkan u saftay kooxdiisa 22 kulan oo kaliya horyaalka Jarmalka ee loo yaqaano Bundesliga, iyadoo kulamada uu seegayna uu ku maqnaa siyaasadda tababare Guardiola oo isku bedbedelay ciyaartooyada (Qaarba maalin ciyaarsiiya) iyo dhaawacyo uu kulamada qaarkood ku seegay.
Ozil : Is Muujin Dambe Iguma Hadhin
Video: Ronaldo Oo Salaanta La Dhaafay Platini Iyo Xurgufta Curatay
21/12/2014 Abdiwahab Ahmed
Carlo Ancelotti: “Spain Way Nasiib Baddan Yihiin Maadaama Ay Heystaan Messi Iyo Ronaldo Oo Ah Labada Xiddig Ee Adduunka Ugu Wanaagsan”
10/09/2015 Samatar Mohamed